वैंशमैं किन फुल्छ कपाल, यसरी पाउनुस् मुक्ति – Everest Dainik
वैंशमैं किन फुल्छ कपाल, यसरी पाउनुस् मुक्ति
हरेक मासिनको चाहना हुन्छ, आफ्नै कपाल सँधै कालो नै रहिरहोस् । तपाईँको पनि यस्तै चाहना हुन सक्छ । तर उमेर बढदै जाँदा जति चाहना व्यक्त गरेपनि कपाल सेतो भएरै छोड्छ । कपाल सेतो हुनु स्वभाविक हो । तर कतिपय मानिसमा ढल्किदो उमेर भन्दा अगाडि नै कपाल सेतो हुने गर्दछ ।
बुढेसकालमा हुने सेतो कपालले मान्छेलाई खासै चिन्तित नतुल्याउने भएपनि उमरे नपुग्दै कपाल फुलेमा चिन्ता मान्नु स्वभाविक हो ।
युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने समस्याले अधिकांश मानिस तनावमा हुन्छन् ।
दूषित हावापानी खानपान ज्यादा चिन्ता लिने आदत आदिले कपाल फुल्ने गर्दछ त्यस्तै कसैको बंशानुगत गुणले पनि युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने समस्या हुन जान्छ । सेतो कपालले मानिसको पर्सनालिटीमा समेत असर पुर्‍याउँछ । मेलेनिन, भिटामिन बी–१२ को कमी, वंशाणुगत गुण, थाइराइडलगायतका समस्याले पनि मानिसको कपाल फुल्ने गर्छ ।
सम्बन्धित् समाचार चाहिए त सेता र चम्किला दाँत ? जानौं किन हुन्छन हाम्रा दाँत पँहेला
वैज्ञानिकहरुका अनुसार यसरी जमेको हाइड्रोजन पेरोअक्साइडलाई हटाउन र यस्तो रसायन कपालको कोषिकामा जम्मा हुनै नदिन विशेष उपचार गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित् समाचार काजु खानुस् यस्ता छन् फाइदाहरु
यदि तपाईँले खाने खानामा सन्तुलित छैन् भने त्यसले पनि कपाल सेती हुन सक्छ । त्यसैले कपाल सेतो हुनबाट बचाउन खानाको मात्रा मिलाउनु जरुरी छ । पौष्टिक आहार युक्त खाना खानु पर्ने हुन्छ ।
प्याजको रसले कपाल सेतो हुनबाट जोगाउँछ । प्याजका टुक्रालाई राम्रोसँग पिसेर त्यसलाई निर्चोने र आएको रसले कपालको जरामा मालिस गर्ने हो भने फाईदाजनक हुन्छ । तर यो हप्तामा दुईपटक सम्म गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मेहेन्दी र मेथी
कपाल सेतो हुनबाट बचाउने अर्को उत्तम उपाय भनेको मेहेन्दी र मेथीको मिश्रण हो । यी दुईलाई मिसाएर पेष्ट बनाउने र त्यसमा बटर मिल्क वा नरिवलको तेल मिलाएर कपाल मालिस गर्ने हो भने कपाल सेतो हुनबाट जोगाउँछ ।
सम्बन्धित् समाचार ‘कस्मेटिक सर्जरी’ गर्ने साेचमा हुनुहन्छ ? यी कुरा जान्ने कि !
ट्याग्स: hair fall, Hair whitening